Akasimba NdFeB uye SmCo magineti anogona kuburitsa simba rekutyaira zvimwe zvinhu pasina chairo kuonana, maapplication mazhinji anotora mukana weichi chiitiko, kazhinji senge magineti ekubatanidza uyezve magineti akabatanidza mapombi ezvisimbiso-zvishoma zvinoshandiswa. Magnetic drive couplings inopa isina-kuonana kuchinjisa torque. Kushandiswa kweaya magineti ekubatanidza kunopedza kuyerera kwemvura kana gasi kubva kuzvinhu zvehurongwa. Zvakare, iyo yemagineti couplings zvakare ari ekuchengetedza mahara, nekudaro kudzikisa mutengo.
Magetsi anogoverwa sei mune remagineti pombi yekubatanidza kushanda?
Akabatanidzwa NdFeB kana SmComagineti akasungirirwa kumhete mbiri dzakatenderedzwa kune ese mativi egaba remidziyo yepombi pekugara. Mhete yekunze yakasungirirwa kune shaft yemotokari; mhete yemukati kune pombi shaft. Mhete imwe neimwe ine huwandu hwakaenzana hwemagineti akaenzana uye anopikisana, akarongedzwa nematanda ekuchinjanisa akatenderedza ringi yega yega. Nekutyaira iyo yekunze coupling hafu, torque inopfuudzwa nemagineti kune yemukati yekubatanidza hafu. Izvi zvinogona kuitwa kuburikidza nemhepo kana kuburikidza neye isiri-yemagineti inodzivirira, ichibvumira kusarudzika kwakazara kwemagineti emukati kubva kumagineti ekunze. Iko hakuna kwekubata zvikamu mumagineti ekumhanyisa mapombi ayo anotendera torque kufambisa kuburikidza ese maviri angular uye akafanana kusarongeka.
Nei NdFeB kana SmCo isingawanzo pasi magineti anosarudzwa mune rinobva pombi couplings?
Iwo magineti zvigadzirwa anoshandiswa mune magnetic couplings anowanzo kuve Neodymium uye Samarium Cobalt magineti ane anotevera zvikonzero:
1. NdFeB kana SmCo magineti rudzi rwemagineti anogara aripo, ayo ari nyore kushandisa kupfuura magetsi emagetsi anoda magetsi ekunze.
2. NdFeB neSmCo magineti anogona kusvika simba rakakwira zvakanyanya kupfuura echinyakare magineti. Neodymium sintered magineti inopa yakanyanya simba chigadzirwa yechigadzirwa chero chipi zvacho nhasi. Yakakwira simba kuwanda inoita yakareruka huremu hwakaderera magineti zvinhu kusvika kunatsiridzwa kunyatsoshanda kweiri rese pombi system ine compact saizi.
3. Rare pasi Cobalt magineti uye Neo magineti anogona kushanda pamwe nani kupisa tembiricha. Mukushanda kwekuita, sekushanda tembiricha kuri kuwedzera kana kudziyisa kunoitwa neaddy yazvino, simba remagineti uye ipapo torque ichave neashoma kudzikisira nekuda kweiri nani tembiricha coefficients uye yakakwira kushanda tembiricha yeNdFeB neSmCo sintered magineti. Kune mamwe akakosha akanyanya tembiricha kana inoparadza fluid, SmCo magineti ndiyo yakanakisa sarudzo yemagineti zvinhu.
Chii chimiro NdFeB kana SmCo magnets a rinoshandiswa rinobva pombi couplings?
Iwo maSmCo kana NdFeB sintered magineti anogona kugadzirwa mune dzakasiyana chimiro uye saizi. Yekushandisa mune magnetic pombi yekubatanidza, kunyanya magineti maumbirwo aribhuroka, chingwa kana chidimbu cheArc.
Iyo huru inogadzira yekusingaperi yemagineti yekubatanidza kana magineti akabatanidzwa mapombi munyika: